Iko kukosha kwekusungwa kwepamoyo mune vaviri vacho | Bezzia
Iko kukosha kwekusungwa kwepamoyo mune vaviri vacho
Maria Jose Roldan | 04/05/2021 22:00 | Hukama
Hazvisi zvisizvo zvachose kuona huwandu hukuru hwehukama hwakavakirwa pakunamatira pamoyo.. Dambudziko hombe nderekuti vanhu vazhinji vanoona chinamato ichi sechinhu chakajairika mukati mevaviri ava.
Nekudaro, kunamatira hakuna kufanana nerudo nerusununguko uye kuzvimiririra mune chero hukama chinhu chakakosha kana zvasvika pakuva vanofara mukati mevaviri. Muchinyorwa chinotevera tinokupa yakatevedzana yenongedzo kuti uwane imwe yemanzwiro ekuzvibata mukati meumwe wako.
1 Keys dzekuziva kuti iwe unotambura nekushushikana kwepamoyo
2 Ndezvipi zviratidzo zvinoitika mukubatana kwepfungwa
3 Iko kukosha kwekusungwa kwepamoyo mune vaviri vacho
Keys dzekuziva kuti iwe unotambura nekushushikana kwepamoyo
Chimwe chezvinhu zvakajeka izvo zvinogona kuratidza kuti unonetseka nekusungirirwa, Ichokwadi chekusanakidzwa nerusununguko rwako uye rusununguko semunhu. Kuchengeta mumwe wako mupfungwa nguva dzose hakuna kunaka zvachose uye kunogona kukonzera kuti hukama huve huturu.
Kufara hakugone kutsamira pane mumwe wako nguva dzese. Munhu anofanira kuzvifarira iye uye kwete mumwe munhu. Kana izvi zvikasaitika, zvakajairika kuti hukama huri kutaurwa hwakamira pakunamata kwakasimba kune mumwe munhu.
Ndezvipi zviratidzo zvinoitika mukubatana kwepfungwa
Pane zviratidzo zvakajeka izvo zvinowanzo kuratidza kuti munhu haana chero rudzi rwekusununguka uye anoratidza kushushikana kwakasimba pamoyo:
Munhu wacho haagone kunakirwa chero nguva, kana mumwe wako asipo.
Vaviri vacho vanobatwa paatari uye iwe unongoona hunhu uye zvakanaka zvinhu nezvazvo.
Kuvapo kwegodo uye kutya kuirasa zvachose.
Iko hakuna kuzviremekedza uye kuvimba.
Iko kune kumwe kunetseka uye kutya yekuziva nguva dzose zviri kuitwa nevaviri ava.
Sezvatatotaura pamusoro apa, kubatana kwepamoyo hakuna kunaka kune vaviri vacho sezvo zvisina hutano kune chero wevanhu vaviri. Sezvineiwo, boka rinofanira kunge riripo nguva dzese:
Icho chinhu chimwe kurarama semurume nemukadzi uye kugovana hupenyu nemumwe munhu uye zvakatonyanya kuganhurira hupenyu kune vaviri vacho zvizere. Izvo zvakakosha kuti uve nehupenyu hwako kuti ugone kuzvinhu zvakasiyana sekuenda kunze neshamwari kana kunotenga.
Mufaro haufanirwe kuganhurirwa kune vaviri chete. Kunyangwe uine hukama neumwe munhu, iwe unofanirwa kuziva kuve wega uye kugona kunakidzwa nehumwe kusurukirwa nguva nenguva.
Iwe haugone kuvimba nemumwe munhu kuti ufare. Munhu mukuru anofanira kuzviwanira mufaro, spasina rubatsiro rwemunhu.
Vakaroorana havagone kubva mukusavimbana sezvo izvi zvisina hutano kuhukama hwakadai. Kuvimba ndiyo mbiru yakakosha panofanira kuvakwa humwe hukama. Kana izvi zvikaitika hapana chikonzero chekuti godo rinotyisa rionekwe. Kunze kweizvozvo uye kuti pave neuto, zvakakoshawo kuti kuve nekutaurirana pakati pevanhu vaviri.
Muchidimbu, Chero hukama uhwo hunofungidzirwa hune hutano hunofanirwa kunge hwakavakirwa padanho repamoyo revanhu ava. Chikwata ichi chakakosha kuti hukama husimbiswe uye nhengo dzese dziri kufara zvechokwadi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Psychology uye vaviri » Hukama » Iko kukosha kwekusungwa kwepamoyo mune vaviri vacho
Iwo madiki madiki anokutadzisa iwe kubva kuva nehutano hupenyu